Mandeha miadana ny fampiantranoana WordPress? Mifindra monina amin'ny fampiantranoana tantanana | Martech Zone
Wednesday, May 6, 2020 Talata, Oktobra 27, 2020 Douglas Karr
Na dia misy antony marobe aza fa mandeha miadana ny fametrahana WordPress anao (ao anatin'izany ny plugins sy lohahevitra tsy dia misy soratra), mino aho fa ny antony lehibe indrindra mahatonga ny olona hanana olana dia ny orinasany fampiantranoana. Ny filana fanampiny ny bokotra sosialy sy ny fampidirana dia mampifangaro ny olana - ny ankamaroan'izy ireo dia miadana be koa.
Mahamarika ny olona. Mahamarika ny mpihaino anao. Ary tsy miova izy ireo. Ny fananana pejy iray maharitra 2 segondra mahery raha te hampakatra azy dia mety hampitombo ny isan'ny mpitsidika mandao ny tranokalanao… na ny ratsy kokoa… ny sarety fiantsenanao. Noho izany antony izany dia ilaina ny miasa amin'ny fanatsarana ny hafainganana.
Ho an'ny WordPress, nifindra tany izahay Flywheel ary nanana valiny mahatalanjona. Ny tranonkalantsika dia miakatra hatrany amin'ny 99.9% na avo kokoa (ary rehefa tsy izany dia mazàna isika no miasa ao). Manana ny fotodrafitrasa ilaina sy ny fitaovana fitantanana rehetra izy ireo mba hahamora ny fitantanana ny tranokalanao - na ny tranokalan'ny mpanjifanao rehetra:
1-Kitiho ny famerenana - Famerenana eo noho eo ary avereno amin'ny alàlan'ny Snapshot Backups mora.
Features an'ny masoivoho - Ny fahaizana mitantana ny mpanjifa ao amin'ny kaontin'ny client
planina - Tehirizo ny lohahevitry ny tranonkala sy ny plugins ho fanaingoana manokana azonao ampiasaina amin'ny fananganana tetikasa ho avy.
Caching - Teknolojia momba ny cache amin'ny haavo sy haingam-pandeha.
Vonona ny CDN - Fotoana mavesatra haingana ho an'ny atiny miovaova.
fanamboarana - Ny fahaizana clone tranokala mora foana.
Famerenana isan'andro - Rafitra mandeha ho azy sy miverimberina hanohanana ireo rindranasao mitsikera.
Firewall - Afomanga mahery sy mahery eo anelanelan'ny angon-drakitrao sy ny fandrahonana any ivelany.
Malware Scanning - Ny fikarohana sy ny fanafoanana ireo malware mampidi-doza.
Support - Fanohanana ara-teknika mahafinaritra avy amin'ny manam-pahaizana WordPress monina any Etazonia.
Free SSL - Alefaso SSL manerana ny tranokalanao rehetra.
Staging - Ny fahaizana clone sy miasa ao anatin'ny faritra iray mihetsika, avy eo manosika mivantana.
Inona ny WordPress Managed Hosting?
Mpiasa 50 mahery no nifindra monina tany Flywheel miampita miaraka amin'ny fametrahana WordPress tsy latsaky ny 50, ary lasa tsy nisy kilema izy rehetra. ary Flywheel dia natolotry ny WordPress!
Oh, ary voalazako ve fa manana izany i Flywheel plugin fifindra-monina manokana?
Antony lehibe hifindra monina Flywheel ahitana:
Fanohanana WordPress - Tsy azoko lazaina aminao ny fotoana rehetra nifaneraseranay tamin'ny mpampiantrano izay nanomezan'izy ireo tsiny mivantana ny WordPress tamin'ny fampitandremana fa tsy notohanana izy io (na dia matetika aza nisy fametrahana 1-click) Olana fahazoan-dàlana, olan'ny backup, olana ara-piarovana, olan'ny fampisehoana… nomenao anarana izany, nifandona taminay izahay ary ny mpampiantrano rehetra dia nanome tsiny ny WordPress.
Fanohanana ho an'ny masoivoho - tombony lehibe tokoa ny fananan'ny mpanjifa ny kaonty fa ampidirina ho mpampiasa nahazo alàlana izahay, mpampiasa mpanohana nahazo alàlana, ary mpampiasa FTP nahazo alalana. Raha mandao antsika ny mpanjifa dia afaka mijanona hatrany izy ireo Flywheel ary manohy ny fahombiazan'izy ireo. Tsy misy intsony ny mitazona takalon'aina amin'ny mpanjifa na manana fotoam-pifindramonina tsy mahazo aina.
Vola Affiliate - Isaky ny manoratra mpanjifa amin'ny Flywheel izahay dia mampiasa Flywheel. Misokatra sy manao ny marina amin'ireo mpanjifanay izahay fa afaka miala kely amin'ny fifampiraharahana… ary satria tsy manefa vola izahay amin'ny famindrana azy ireo dia tsy mampaninona azy ireo mihitsy.
fanamboarana - ny fahaizan'ny clone seamless tranonkala iray dia mahafinaritra fotsiny. Tsy mila mandray tontolo iainana mihetsika intsony isika any amin'ny toerana hafa ary avy eo mamindra azy any amin'ny mpampiantrano, Flywheel nametraka azy ireo avy hatrany. Afaka mampiseho ny fandrosoan'ny mpanjifa izahay, avelao izy ireo hiditra ary haka izany ho an'ny kapila fitsapana, ary atosika mivantana amin'ny tsindry bokotra vitsivitsy.
backups - Ny backup ary ny fanarenana 1-tsindry mandeha ho azy dia nahafinaritra. Nanana mpanjifa iray izay nanandrana ny fampidirana antoko fahatelo izahay ary isaky ny nilaza ny antoko fahatelo fa vonona ny handeha mivantana izy ireo dia handeha izahay ary tsy nahomby. Afaka namerina avy hatrany ny tranokala teo aloha izahay tao anatin'ny segondra vitsy mandra-pamitan'izy ireo ny fotodrafitrasa napetrak'izy ireo noho ny fangatahana.
Performance - Cache solid solid ary tamba-jotra fanaterana votoaty lehibe dia nahatonga ny mpanjifanay rehetra tsy hiasa tsara. Ny tranokala haingana dia manatsara ny refin'ny fiovam-po ary na ny milina fikarohana aza… singa lehibe iray tsy tokony hanahirana antsika izany.
WP Cache - ankoatry ny maotera cache an'ny Flywheel dia manohana tanteraka ihany koa izy ireo WP Cache ary ny WP Rocket plugin. Mahatalanjona io plugin io - miaraka amin'ny fahaizan'ny entana mavesatra, fanalefahana, fanangonana, fikojakojana ny tahiry ary ny fahafaha-manao cache mialoha. Plugin mendrika ny hampiasa vola io!
WordPress Security - Ny teknikan'ny hacking matanjaka dia mety hanimba ny kinova WordPress taloha na lohahevitra sy plugins voasoratra ratsy. Flywheel manara-maso ny fanovana nataonao ary miantoka fa tsy mora tohina ny tranokalanao satria hitantsika fa mbola voajirika ny mpanjifan'ny olon-kafa. Mandondòna ambony hazo, tsy mbola nanana olana izahay. Ary tianay izany Flywheel hanavao ny kinova mavitrika raha misy loza mety hitranga amin'ny fiarovana.
Staging - Flywheel manana fahaiza-manao mihombo izay azon'izy ireo atao amin'ny iray amin'ireo tranokalanao, ahafahanao manangona ny tranokalanao amin'ny faritra iray, manavao ny tranokala mihetsika, ary manery azy hiverina hiaina rehefa vonona ianao. Fitaovana tsy mampino izay ilaina amin'ny olona mitady fanavaozana lehibe ny tranokalany - toy ny fanatsarana lohahevitra vaovao.
Flywheel eo an-toerana
Raha tsy ampy izany, Flywheel namolavola ny fangatahana fametrahana azy manokana antsoina hoe Local. Ny fampiharana dia ahafahan'ny mpamorona manao:
Mamorona tranokala eo an-toerana amin'ny tsindry iray!
Manaova fanovana ary asehoy ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny URL demo
Avoahy ny Flywheel amin'ny tsindry iray fotsiny (ary mety fotsiny)
Nahazo ny fanampian'ny Flywheel injeniera amin'ny olana maromaro sahady. Manana tranokala voajirika izahay ary nitondra ekipa manam-pahaizana momba ny fiarovana ny ekipany mba hamantatra ny olana (plugin matetika) ary hanitsiana azy. Nanana tranokala izahay izay nanana olana momba ny fahombiazan'ny ekipa (sy ny interface) izay nanampy anay tamin'ny famahana olana sy fanitsiana. Nanana tranokala naharitra 10 segondra izahay mba hampidinana ireo mpampiantrano hafa izay mavesatra ao anatin'ny 2 segondra Flywheel.
Ary tsy ny filazanay ihany izany. Nozarainay tamin'ny sampan-draharaha hafa ny fahombiazanay, ary nafindran'izy ireo tany daholo ny mpanjifany Flywheel. Safidy tokana miaraka amin'ny WordPress dia mamela ny mpanjifanao hividy ny drafitra ary avy eo ampio ny ekipanao ho mpampiasa nahazo alalana. Io dia ahafahanao mangataka fanampiana amin'ny anarany sy hitantana ny fidiran'ny mpampiasa sy ny SFTP - mandritra ny fotoana rehetra ananan'ny mpanjifa ny kaonty. Omeo ny mpanjifanao ny kaodinao sy Flywheel dia hanao mandoa anao.
Ny fanatsarana ny zava-bita vokatr'izany dia nanampy tamin'ny fampihenana ny tahan'ny fihenam-bidy, fanitarana fotoana eo amin'ny pejy, ary - noho ny fanatsarana ny hafainganan'ny pejy - dia nanampy anay hahalala ny fahitana ny milina fikarohana. Oh… ary eny, ny rohy amin'ity lahatsoratra ity dia rohy mpiara-miasa aminay.
Mpamatsy fampiantranoana voatantana WordPress hafa
WordPress Managed Hosting dia malaza amin'ny fahazoan-dàlana lehibe an'i WordPress. Misy mpampiantrano lehibe hafa ao amin'ity orinasa ity ihany ary efa nampiasainay izy rehetra:
WPEngine - manana Flywheel izao! WPEngine dia manana loharanom-pahalalana zarazaraina nefa manana endrika tsy manam-paharoa. Ny iray notakianay ho an'ny mpanjifa dia ny fahafaha misintona automativa fisie log ho an'ny fanarahana.
Kinsta - dia nanao onja lehibe tamin'ny indostria noho ireo fotodrafitrasa tsy mampino. Mihazakazaka tranokala haingam-pandeha mahomby ho an'ny marika lehibe dia lehibe izy ireo.
Tags: safidy hafa amin'ny wpenginetsara indrindra fampiantranoanaflywheelflywheel eo an-toeranassl maimaim-poanakamo entanafampivoarana wordpress eo an-toeranafampiantranoana WordPress voafehyWordPressbackup an'ny WordPresscache wordpresswordpress cdnfanatsarana ny database databasefampivoarana ny wordpressfirewall wordpressWordPress hostingmalware amin'ny WordPresswordpress sslfampisehoana tsangambatofanohanana wordpresswpcachewpenginewpengine hosting
26 Aogositra 2011 amin'ny 1:14 PM
Nojereko izy ireo fa ny olako amin'ny ankamaroan'ireny fivarotana WordPress be mpampiantrano ireny dia ny tokony hamelanao singa iray amin'ny fifehezana izay tsy ekeko. Ny fihazakazahana tranokala goavambe dia mitaky ahy hifehezana tanteraka ny lafiny rehetra - ao anatin'izany ny plugins sy ny fidirana amin'ny database. Ny fonosam-bidin'izy ireo koa tsy misy dikany raha ny tena izy - $ 100 / volana ho an'ny fizarana pejy 250k sy 100gb? Ferana tsy misy fetra izay hataoko ao anatin'ny 2-3 herinandro. Mampiasa Media Temple aho izao (ary mandoa be amin'izany) - ary mampiasa ny fitaovana 'fanatsarana' (cahcing, CDN, sns) misy, tsy afaka mandoa fotoana mihoatra ny 9-10 segondra aho. Ny teboka ezahiko lazaina dia ny tsy fisian'ny bala volafotsy raha ny amin'ny fampandehanana haingana ny WordPress. Efa nanandrana azy rehetra aho.
26 Aogositra 2011 amin'ny 5:25 PM
Azonao atao ny mifehy ny lafiny rehetra amin'izy ireo, Jonathan. Ny tranokalanay dia manana customization sy plugins amina taonina hahafahany manao izay rehetra tadiavinay. Mino aho fa tsara ny vidiny ho an'ny bilaogin'ny orinasa antonony… ny olon-tsotra tsy mahay mametaka CDN sy cache, noho izany dia ambany io vola io. BTW: Mampiasa Mediatemple koa izahay… miaraka amin'ny CDN sy Cloudflare ary tsy mandeha tsara araka ny tadiavinay izany.
Sep 14, 2011 ao amin'ny 5: PM PM
Mampiantrano ny tranokala WordPress amin'ny serivera mpizara Media Temple ve ianao na mpizara virtoaly voatokana? Nanana tranokala tsotra nampiarahina tamin'ny (mt) nandritra ny 2 taona teo amin'ny takelaka aho ary ny fotoana fandefasana dia mampihoron-koditra fotsiny, miadana sy mahatsikaiky ary ny faritra admin dia fanaintainana mahatsiravina fotsiny amin'ny ampondra. Voalazako ve fa nahatsiravina tanteraka ny zavatra niainana iray manontolo?
Nataoko izay rehetra azo atao eto ambanin'ny masoandro hanatsarana ny tranokalako afa-tsy ny fividianana fitoeram-pandrefesana ary tsy misy mandeha. Nanatsara izany tamin'ny minify, WP Super Cache, sns. Nanandrana nampiasa CloudFlare tamina tranonkala iray nampiantranoana wp aza aho, saingy mampihomehy ny fotoana enta-mavesatra. 20 segondra mba hampidirana ny pejy fandraisana?
Nanapa-kevitra ny hamindra ny tranokalako ho any Hostgator aho ary ny fiakarana haingana dia avo telo heny. Mbola malahelo ny tontonana fanaraha-maso (mt) aho izay tsy mampino saingy ny hafainganam-pandehan'ny tranokalako dia manome interface tsara mijery.
Ankehitriny dia miantsena mpampiantrano tranonkala vaovao indray aho fa amin'ity indray mitoraka ity dia mila mametraka multisite miaraka amin'ny fahaizana mampiantrano tranokala bitika 10 ao anatiny aho. Izaho dia nijery (mt) virtoaly natokana, WP Engine ary Page.ly. Media Temple dia toa fifanarahana tsara lavitra kokoa ary efa nodoran'izy ireo tamin'ny takelaka aho, saingy manontany tena aho raha hanome ahy ny hafainganana haingam-pandeha ilaiko sy ny fahamoran'ny fampiasana izay miaraka amin'ireo takelaka fanaraha-maso ireo ny virtoaly manokan-tena.
Sep 14, 2011 ao amin'ny 7: PM PM
MT dia "fifanarahana" fotsiny raha mila milina tsy misy fanohanana manokana momba ny WordPress ianao. Raha te-hiaro tena ianao, manafaingana ny tenanao, manombatombana, CDN ny tenanao (ary mandoa izany).
Ary avy eo misy ny fahazoana avo. Samy noho ny olana momba ny rindrambaiko sy ny fitaovana, ny fametrahana mpizara iray dia tsy afaka atao be dia be toy ny cluster.
Raha ny fahitanay azy, ny manandrana mitahiry $ 20 / mo fa ny fanaovana an'izany rehetra izany dia tsy fampiasana fotoana na vola. Mora ho anay izany satria manonitra ny vidin'izany rehetra izany amin'ny mpanjifanay rehetra izahay; be loatra ny tsy fandeferana raha tsy hataon'ny tranonkala tokana raha tsy TechCrunch ianao.
Misaotra Jason. Mitifitra fampahalalana vitsivitsy avy amin'ny tranokalako ianareo ho an'ny teny nalaina.
26 Aogositra 2011 amin'ny 6:17 PM
Salama Joanathan, azoko tsara hoe avy aiza ianao, saingy mbola tsy nanandrana azy rehetra ianao raha mbola tsy nanandrana anay. 🙂
Ireo fetra ireo dia mpitari-dalana - tsy vonoinay ny tranokalanao na zavatra hafa raha tratranao izy ireo, midika fotsiny fa lafo kokoa ny vidinay ary ho lafo aminao koa izany. Afaka miresaka momba izany isika.
Betsaka ny olona tsy afaka nanatsara ny lasa tamin'ny teboka iray, fa nahita fanatsarana niaraka taminay avy eo. satria: http://wpengine.com/our-infrastructure .
Ary izahay dia * manome * fifehezana anao amin'ny plugins, kaody manokana ary fidirana amin'ny data, koa aza mieritreritra ianao fa hanidy anao!
Raha tokony ho izany, maninona raha omena fotoana izahay… mamindra kopian'ny bilaoginao, avy eo mandefasa mailaka (jason at wpengine) ary andao jerena izay azontsika atao.
9 Okt 2011 amin'ny 11:42 PM
9-10 segondra dia tsy azo ekena. Izaho manokana dia hitako fa nifindra avy tany amin'ny Tesis ho any amin'ny drafitra Woo no nahatonga ny tranokalako hiadana kokoa. Nametraka tamin'ny 3 segondra aho ary lasa miadana kokoa izao.
Hitako fa ny VPS dia tsara lavitra noho ny fampiantranoana iraisana ary namindra tranokala marobe ho any MT izay gimikika sy manahirana amin'ny hevitro ary lafo loatra
Afaka mahazo VPS amin'ny cPanel ianao amin'ny $ 35 isam-bolana ary mora kokoa amin'ny fonosana isan-taona. Mbola mora kokoa indray ho an'ny VPS miaraka amin'i Plesk
1 Okt 2012 amin'ny 1:52 PM
Salama Brad… Raha tsy mampaninona ahy ny manontany ahy .. taiza no nahazoanao "VPS niaraka tamin'i cPanel $ 35 isam-bolana"
Any amin'ny MT ve izany? Nilaza ianao fa nifindra tranokala maro tany fa inona ny gimik'izy ireo? Faly miaraka amin'izy ireo ve ianao?
Somary very hevitra ihany aho amin'ny hevitrao.
Aug 26, 2011 amin'ny 11: 08 AM
Anonyme, heveriko fa ho hitanao fa tsy dia mitovy ireo olona ireo. Voalohany, manana fidirana SFTP ianao hahafahanao manamboatra ny fanovana ilainao amin'ny lafiny plugin. Koa satria manana fidirana fisie feno ianao dia afaka manao izay tianao amin'ny angon-drakitra. Izaho koa dia ao amin'ny MediaTemple ary mampiasa caching sy CDN… fa izaho sy ianao dia karazany tsy fahita firy. Raha misy olona tsy mahatakatra ny fomba hanatsarana ny hafainganan'ny pejy, ny WP Engine dia vahaolana tonga lafatra satria manahy ny amin'ny fampisehoana izy ireo ka tsy mila izany. Ny habetsaky ny pejy sy ny fantsom-pifandraisana dia mihoatra lavitra noho izay takin'ny mpitoraka bilaogy antonony mahazatra. Raha manakarama olona matihanina hanatsara ny tranokalanao sy handamina CDN ianao dia handany vola be lavitra.
26 Aogositra 2011 amin'ny 5:01 PM
Tompoko tsara ny tranokalanao dia mavesatra be.
26 Aogositra 2011 amin'ny 5:14 PM
Tsy mbola - fa hanao izany!
26 Aogositra 2011 amin'ny 5:16 PM
Marina? Noheveriko fa efa nifindra monina ianao. Raha tsy izany dia manao tsara ianao amin'ny hafainganana hafainganana.
26 Aogositra 2011 amin'ny 5:22 PM
Nanomboka nampiasa Cloudflare aho - zahao, serivisy maimaimpoana io ary naka entana be dia be tamin'ireo mpizara fampiantranoana anay tao Mediatemple. Tsy ny haingana indrindra, fa ny hafainganam-pandeha ankapobeny dia mihatsara noho io.
26 Aogositra 2011 amin'ny 5:50 PM
Mahatalanjona. Tsy maintsy mijery azy ireo aho. Mampihomehy, ny endrika tiako indrindra amin'ny WPEngine rehefa nijerijery azy aho dia tsy ny hafainganana na ny fizarana. Io no fizarana 1-tsindry. Ahoana no mamy?
28 Aogositra 2011 amin'ny 1:40 PM
Mieritreritra aho fa izay rehetra misy ifandraisany amin'i Jason Cohen dia volamena mafy. Tsy nila nila ny CodeCollaborator-ny aho, ekipa tokana, LOL. Saingy, efa nanaraka azy aho ary nandinika ny filozofia nandritra ny roa taona mahery.
Tamin'ny fotoana nanoratany voalohany momba ny WP Engine dia nahaliana ahy izany. Mazava ho azy, averiny tsindraindray izany ary izany no nipoitra androany.
Mampihomehy, mety mbola tsy vonona ho an'ny WP Engine aho, noho izany dia hijery ao amin'ny CloudFlare aho.
Ho fanaraha-maso an'ity resaka ity - nifarana tamin'ny famindrana ny fampiantranoana ho an'ny Anglotopia.net ho Wpengine aho ary mihazakazaka haingana kokoa ny tranokalako. Tazoniko ny mpizara MT ho an'ny tranonkala hafa izay tsy olana ny fotoana fandefasana entana fa amin'izao fotoana izao dia tokony hisy ny Anglotopia.
26 Jun 2012 amin'ny 4:45 AM
lafo loatra ho an'ny tranonkala tokana. Handeha ho an'ny VPS tsy tantanana aho. Manana domains tsy voafetra sy rafitra caching toy ny xcache aho.